Wednesday February 12, 2020 - 15:06:10 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in iska hor'imaad xooggan uu gudaha magaaladaas ku dhaxmaray maleeshiyaad hubeysan oo kala taabacsan siyaasiyiinta isku haysata maamulka magaalada.
Maanta duhurkii ayaa rasaas xooggan laga maqlay bartamaha magaalada, ciidamo daacad u ah Axmed Madoobe ayaa rasaas ku furay dad taageersan dowladda Farmaajo kadibna waxaa goobta soo gaaray maleeshiyaad daacad u ah Cabdi Naasir Seeraar.
Goob joogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaadka Seeraar ay iska hor'imaad xooggan lagaleen ciidamada maamulka 'Jubbaland' balse markii dambe ayaa laga itaal roonaaday waxaana waddooyinka Kismaayo isku gedaamay ciidamada Axmed Madoobe.
Rasaas goos goos ah ayaa marmarka qaar laga maqlayaa goobaha ay isku hor fadhiyaan labada dhinac, banaan bax lagu taageerayo Dowladda Federaalka uuna geed fadhi u yahay Cabdi Naasir Seeraar ayaa Kismaayo ka bilaawday saacado kadib markii ay magaalada gaareen wafdi ka socda dowladda Mareykanka.
Taliyaha ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa Axmed Madoobe kulan kula leh Kismaayo waxaana la sheegay in saraakiisha Americanka ah ay hoggaamiyaha Jubbaland ku cadaadinayaan heshiis uu lagaaro dowladda Farmaajo.